Umuthi «Nitrix» - kuyinto ibhekwa njengengxenye yokudla okunempilo eyenzelwe abadlali professional. Okwamanje, kuba ethandwa iningi booster iqembu nitrogen oxide. It bakwamukela ukuthuthukisa umsoco kwemisipha izicubu. Umkhiqizi - BSN (USA).
Njengoba isenzo vasodilator anganqamuki abadlali professional bavame ukutusa ikhambi BSN - «Nitrix». Uphenyo abaqeqeshi (ngezinhlobo ezehlukene zemidlalo) zibhekisele ekwenteni ncono ukusebenza kwemisipha. Khumbula ukuthi vasodilator - ithuluzi okuhloswe ngazo ukunwetshwa mafutha anciphisa isikhala esingaphakathi yegazi, okuholela ukwehlisa wegazi. Lula umphumela ibangelwa abatholako kancane zomuthi emgudwini wegazi. Futhi, izidakamizwa kusiza ukulethwa oksijini kwandisa ukusetshenziswa yayo kwemisipha izicubu, isekela umsebenzi izitsha inhliziyo negazi. Lokhu ibangelwa nokugcina njalo isimo ukuphumula izindonga semithambo. Ngenxa yalokhu kalula umsoco omningi futhi ngamanani amakhulu ufake imisipha amaseli. Ngakho-ke, i-ukwanda okusheshayo e imisipha uyelulekwa aphoyintimenti «Nitrix» izindlela (BSN). Izibuyekezo abasubathi bathi ngenxa ngokuthatha izidakamizwa kakhulu kwandisa amandla, amandla yokutakula kwenzeka uhlasela ngokushesha kunokujwayelekile.
Lengetiwe «Nitrix» hhayi kuphela Ukusiza ukukhulisa imisipha ukunikezela izakhi ewusizo, umuthi owenza nenani elikhulu glycogen olutholakalayo imisipha ngenkathi ekunciphiseni ezitolo amafutha. Lezi izindawo ukhuthaze abasubathi ukwamukela «Nitrix» izindlela. Izibuyekezo futhi agcizelele ukuthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa kwandisa umuzwa Ukudonswa kwalawo manzi futhi ngokushesha aqede izimpawu kubangelwa acidosis acid. Lokhu kungenxa yokuthi i-izidakamizwa isheshisa ukuhoxiswa by-imikhiqizo, okuholela kwimodi sithuthukiswe kwemisipha.
Kusho babelwe ngemithamo ehlukene, kuye ngokuthi isisindo. Abasubathi, isisindo okuyinto kuze kube ayisishiyagalolunye kilogram, lokhu kudinga ethola Izithako ukudla kathathu ngosuku amaphilisi amathathu. Zithululwe ukudla esiswini - isimo kangcono ekutholeni «Nitrix» kusho. Izibuyekezo zisikisela ukuthi ukusetshenziswa kwezidakamizwa kanye ukudla iyehlisa ekulenzeni libe namandla. Ngaphambi kokudla kufanele okungenani ihora, njengoba izidakamizwa zingafundwa emva okungenani amahora amabili ngemuva kokudla. Inketho engcono kungaba ukuthatha batch lokuqala amaphilisi ngokushesha emva uvuka, bese - isigamu sehora ngaphambi kwasemini futhi isigamu sehora ngaphambi kokudla.
«Nitrix» Izithako abaluleke kakhulu ukudla eziyishumi amagremu glutamine ngelanga parallel yokwamukela. Izibuyekezo ukufakazela ukuthi kusebenze kakhulu scheme elinjalo. Kuyadingeka ngesikhatsi ukwelashwa ukuphuza amalitha okungenani ezintathu amanzi ngosuku futhi udle amaprotheni ngokwanele.
Ijubane ukuqala ukusebenza kuyinto ngabanye, incike izici umzimba emzimbeni kanye nesisindo. Nokho, abasubathi abaningi uqaphela izimpawu zokuqala izinguquko amasonto amabili ngemuva kokuqala yokwamukela kusho «Nitrix». Izibuyekezo futhi bathi, noma kunjalo, umphumela kungabonwa kungakapheli ezintathu kuya amane amasonto. Amandla izidakamizwa kakhulu anda kanye eside yokusetshenziswa kwawo. Umthelela esiphezulu iphelile 3-12 amasonto kwezidakamizwa njalo eyanele. Khona-ke kumelwe uthathe ikhefu (okungenani amaviki 4). Abantu abanegciwane le-Isisindo ezingaphezu kuka ayisishiyagalolunye khilogremu, kutuswa ukwandisa umthamo kuze kube amaphilisi amane kathathu ngosuku.
Umuthi «Nitrix» akuyona imithi, kodwa enezinto eziningi Izimo. Ngakho-ke, ngokuxhumana udokotela ngaphambi kokuba uqale wavuma - kuyadingeka. Noma yimuphi Oqala ukungezwa aze agcine isimo sezempilo phakathi isizathu kokuphazamiseka yakhe kanye nokwelashwa kudokotela.
Umuthi 'Lioton'. Yokusetshenziswa
"Biostrepta" (ikhandlela): yokusetshenziswa, analogs, ukubuyekezwa
Umuthi 'Lavomax ": okubuyayo kuphela
Izidakamizwa Anticancer "Sehydrin": Yokusetshenziswa
'Derinat' izidakamizwa immunomodulatory. Yokusetshenziswa, Izimo
Cream "Ekziter": yokusetshenziswa futhi impendulo
Palette izinwele wemvelo "uLonda" - ezihlukahlukene olukhulu
Eliphezulu kumatilasi - ngesisekelo ubuthongo enempilo
Homo floresiensis (Homo floresiensis): Incazelo